ခန္ဓာဗေဒ Anus စအိုတွင် Internal anal sphincter အတွင်း(စဖင်တာ) အပြင်(စဖင်တာ) (၂)ခုရှိပြီး Feces ဝမ်းအား ထိန်းပေးသည်။
အင်ဂျင်ခန်း Internal Combustion Engines (ICE) သို့မဟုတ် Turbine Engines များသုံးနေသမျှ ကာလပတ်လုံးတွင် လုံလောက်သော လေရရှိရန်အတွက် အင်ဂျင်ခန်းထဲသို့ လေဝင်လေထွက်စနစ်တစ်ခု ထားရှိရမည် ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်လေဝင်လေထွက်စနစ်ရှိသည်ဖြစ်စေ ထပ်မံ၍ လေဝင်လေထွက်စနစ် တစ်ခုပြုလုပ်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာ အင်ဂျင်ခန်းအတွက် လက်ခံနိုင်သော အပူချိန်တစ်ခု ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
အင်ဂျင်ခန်း အင်ဂျင်ခန်းသည် အပူများ ဆူညံမှုများ နှင့် တခါတလေ ဆီများဖြင့် ညစ်ပတ်နေတတ်သည်။ မီးလောင်လွယ်သော ဆီငွေ့များ၊ High voltage (HV) လျှပ်စစ် ပစ္စည်းများ နှင့် internal combustion engine (ICE) တို့ကြောင့် အင်ဂျင်ခန်းသည် မီးလောင်ရန်အတွက် လွယ်ကူသောနေရာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ထို့ကြောင့် အင်ဂျင်ခန်းတွင်တာဝန်ယူရသော အင်ဂျင်နီယာ တို့သည် အနီးကပ် စောင့်ကြည့်လေ့လာနေကြသည်။ ထိုမျှမက စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုစနစ်များ (monitoring system) ကိုလည်းတပ်ဆင်ထားသည်။
ခန္ဓာဗေဒ အစပိုင်း Caecume (စေကမ်)၊ အထက်-ဘေးတိုက်-အောက်ဆင်းသည့်အပိုင်း Colon (ကိုလုံ)၊ အစာဟောင်းအိမ် Rectum (ရက်တမ်) ဟူ၍(၃)ပိုင်းခေါ်သည်။ ၅ စင်တီမီတာရှည်သည်။ စအို Anal cannel (အေနယ်-ကင်နယ်) သည် ၂-၃ စင်တီမီတာရှည်သည်။ အစာခြေရည်မထုတ်၊ ရေနှင့် ဓါတ်ဆားများ စုပ်ယူပေးသည်။ ဝမ်းကိုထုတ်ပြစ် ပေးသည်။ စအိုအဝ၌ Internal and External anal sphincters (စဖင်တာ)များရှိသည်။
ဆိုယုဇ်အာကာသယာဉ် The next manned version of the Soyuz was the Soyuz 7K-OKS. It was designed for space station flights and hadadocking port that allowed internal transfer between spacecraft. The Soyuz 7K-OKS had two manned flights, both in 1971. Soyuz 11, the second flight, depressurized upon re-entry, killing its three-man crew.
ကား ဆွစ်ဇာလန်မှ တီထွင်သူ ဖရန်ဆွိုက် အိုင်ဆက်ဒီ ရီဗက်ဇ် (François Isaac de Rivaz) မှ ၁၈၀၆ ခုနှစ်တွင် ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့် အောက်ဆီဂျင်အရောအနှောကို လောင်စာအဖြစ်အသုံးပြု၍ ပထမဆုံး အတွင်း၌ပေါက်ကွဲသော အင်ဂျင် (internal combustion engine) ကို ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့ပြီး ထိုမှတဆင့် အခြေခံမျှသာဖြစ်သော်လည်း ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပထမဆုံးဖြစ်သော မော်တော်ယာဉ်ကို ဆက်လက်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ထိုဒီဇိုင်းမှာ အလွန်တရာ အောင်မြင်မှု မရခဲ့ပဲ ဆယ်မြူရယ် ဘရောင်း၊ ဆယ်မြူရယ်မိုရေး နှင့် ကြံ့ယာဉ် (hippomobile) ပြုလုပ်သော အီတီယန် လန်နွာ(Etienne Lenoir) တို့ ထုတ်လုပ်ခဲ့သော လှည်းနှင့်တွန်းလှည်းများကို အခြေခံ၍ ကိုးရိုးကားရား အတွင်း၌ပေါက်ကွဲသော အင်ဂျင် တပ်ဆင်ထားသော အခြားယာဉ်များမှာလည်း အလားတူပင်ဖြစ်သည်။